बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ? – Kavrepati
Home / समाचार / बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ?
admin July 1, 2021	समाचार Leaveacomment 215 Views
चितवन, १७ असार – खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १ वेल्सीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पसेर क्षति पु-याएको छ । कयर खोलाले उद्योगमा क्षति पु-याएको हो । उद्योगका निर्देशक बिमल कालाखेतीका अनुसार त्यहाँका धरै सिलिण्डर वगाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुगेका छन् ।”वाढीले उद्योगको संरचनामा नोक्सान पु-याएको छ । उद्योगमा १० देखि १५ हजार सिलिण्डर रहन्छ ।
Previous भाइरसको सङ्क्रमण निको भै ढुक्क संग बसेकाहरुको लागि आयो दुखि बनाउने खबर -‘देखिँन थाल्यो यस्ता गम्भीर समस्या’
Next बाढीले पुरियो एम्बुलेन्स, बिरामीको मृत्यु, चालक घाइते